कस्तो होला सेप्टेम्बरमा आउने आईफोन ११ ? लुम्बिनी पोष्ट डटकम
कस्तो होला सेप्टेम्बरमा आउने आईफोन ११ ?
चर्चित मोबाइल ब्रान्ड एप्पलले अबको तीन हप्ताभित्रै आफ्ना नयाँ मोबाइल विश्वबजारमा ल्याउने आशा गारिएको छ । एजेन्सीहरुका अनुसार कम्पनीले आईफोन ११, ११ प्रो, ११ आर र ११ म्याक्स सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गर्दै छ । विश्वकै ठूलो र अब्बल ब्रान्ड भएकाले एप्पल कम्पनीले ल्याउने नयाँ उत्पादनमा विश्वभर तरंग पैदा हुने गर्छ । पछिल्लो समय विश्वभर फाइभजीकै चर्चा बढिरहँदा मानिसहरुले एप्पलले सोही प्रविधि ग्रहण गर्ने उत्पादन ल्याउने आशा गरे पनि कम्पनीले यसअघि नै फाइभजी फोनहरु सन् २०२० पछि मात्रै ल्याउने बताइसकेको छ ।
त्यस्तै १२०एचजेट ओलेड रेटिना डिस्प्ले पनि कम्पनीले २०२० अघि नआउने बताएको छ । फोल्डिङ फोन त झन् कम्पनीले सन् २०२१ अघि नआउने बताएको छ । त्यसो भए के लेजर जडित थ्रिडी टाइम अफ फ्लाइट क्यामेरा युक्त होला त ? त्यो पनि नयाँ फोनमा हुनेछैन । त्यसो भए आईफोन ११ कस्तो होला त ?
एप्पलका आगामी फोनबारे अनलाइन र पत्रपत्रिकामा धेरैखाले रिपोर्टहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । ती रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने गत वर्षकै आईफोनभन्दा धेरै फरक हुनेछैन आउँदै गरेको आईफोन ११ पनि । यसको मतलब दुरुस्तै भने हुनेछैन । तर यसपटक एप्पले धेरै कुराहरुमा अपग्रेड भने अवश्य गर्नेछ । नयाँ आईफोनमा उच्च क्षमताका नवीनतम प्रविधिका क्यामरा, द्रुतगतिमा चल्ने चिप्स, नयाँ भर्जनको अपरेटिङ सिस्टम आईओएस १३, डार्क ग्रिन प्रकृतिको रंग लगायत हुने आशा गरिएको छ । तर यो नै पक्का हुने भन्ने छैन, रिपोर्टहरुमा जनाइएका कुरा मात्र हुन् । आधिकारिक रुपमा कम्पनीले केही खुलाएको छैन ।
सामसुङ, हुवावे र गुगलले मन लोभ्याउने फोनहरु ल्याइरहँदा एप्पलले त्यसलाई नजरअन्दाज पक्कै गर्नेछैन । ती कम्पनीले आईफोनभन्दा सस्तो मूल्यमा उच्चतम प्रविधि भएका फोनहरु ल्याइरहेका छन् । अझ अगष्ट ७ मा सामसुङले ल्याएको ग्यालेक्सी नोट १० ले त एप्पलका कार्यकारी अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण नै गराएको छ । यसपटक एप्पलले तीनवटा नयाँ आईफोन मोडेल सार्वजनिक गर्न सक्ने वालस्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ ।
कम्पनीले मध्यसेप्टेम्बरमा आफ्ना नयाँ उत्पादन घोषणा गर्दै आएको छ । त्यसकारण यसपटक पनि सेप्टेम्बर १० तारिखमा यस्तो घोषणा गर्न सक्नेछ । सन् २०१८ मा एप्पलले सेप्टेम्बर १३ मा तीनवटा आईफोन सार्वजनिक गरेको थियो । आईफोन एक्सएस र एक्सएस म्याक्स सेप्टेम्बर १३ मा र एक्सआर आईफोन अक्टोबर २६ मा सार्वजनिक गरेको थियो
अमेरिकामा एकैदिन १ हजार ८ सय ९५ जनाको मृत्यु